Sidee Loo Hormariyaa Sirdoonka Nolosha? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sidee Loo Hormariyaa Sirdoonkaaga?
Sidee loo hormariyaa sirdoonkaaga:
1- Ujeedooyinka deji: Hadaf waxaa lagu dejiyaa heerka aad rabto inaad gaarto, si aad u noqotid jihada saxda ah ee habka horumarinta sirdoonka; horumarinta sirdoonka waa in ay noqotaa mid wanaagsan, oo aan aheyn mid aan rasmi ahayn iyo ujeedooyin shakhsiyeed.
2-Jimicsiga oo dhan: Dhammaan barashooyinka xiriirinaya jidhka iyo maskaxdu waxay caddeeyeen in xogta sirta iyo xasuusta ay si aad ah u saameeyeen gobolka jirkiisa, iyo jimicsiga iyo subaxnimadu waxay leeyihiin saameyn weyn oo ku saabsan dhiirigelinta jidhka iyo dhisidda mitokondria oo gacan ka geysta kordhinta sirdoonka iyo hagaajinta waxtarka xasuusta.
3- Cuntada: Cuntooyinka badani waxay caawiyaan horumarinta iyo kicinta xusuusta, sida badeecada badda, dhirta ay ku jirto antioxidants sida kalatin, iyo sidoo kale cabitaanada omega-3 daaweynaya iyo dib u soo celinta unugyada maskaxda waxyeellada leh.
4- Barashada iyo xalinta dhibaatooyinka: Waxbarashadu waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu horumariyo sirdoonka, sida barashada jimicsiga iyo xisaabta, waxaana jira waxyaabo badan oo lagu ciyaaro iyo xujooyin kuwaas oo gacan ka geysanaya sare u qaadida heerka sirta, waxayna doorbidaan cayaaro ku tiirsan caqli iyo xisaab sida ciyaarta (Sudoku), ciyaar aad u qurux badan oo leh waxtarka horumarinta sirdoonka.
5- Baro xirfado cusub oo aad ku barato kuwa hore, sida akhrinta, iskudayista akhriska, sheekooyinka iyo sheekooyinka fekerka iyo dhammaadka fursadaha, marka lagu daro tababbarka dhibaatooyinka adag, iyo horumarinta awooda hore ee aan ku leenahay hab waxtar leh.
Awooda ereyga iyo fikirka
Marka lagu daro awoodda nafsaaniga ah, caafimaadka iyo jirka, waxaa jira awoodda erayga iyo saameynta, awoodda maskaxda iyo siyaabaha fekerka, maxay tahay awoodda erayga? Maxay tahay awooda fikirka? Maxay yihiin qodobada caawinaya?
Fikirka wanaagsani waa mid ka mid ah xoogagga ugu muhiimsan ee uu qofku leeyahay. Fikradda guud ahaan waa feker ahaan iyo fekerka maskaxda, dhaqaaqa, sharaxaadda waxa nagu hareeraya dareen, xusuusin ama aragti, qiimeynta dhammaantiis, iyo helitaanka xalal ku habboon dhibaatooyinka aan la kulanno. Fikradda waa mid taabogal ah oo haboon, waa in la raaco hab quman ay ku jiraan hababka habboon, iyo helitaanka, saxsanaanta iyo saxnimada macluumaadka waa in sidoo kale la sameeyaa waqti isku mid ah.
Tags: Sidee Loo Hormariyaa Sirdoonkaaga?
Next post Goobaha Ay Saamayso Awoodda Fekerka Maskaxda
Previous post Kobaca Garashada iyo Fahanka